यिनै हुन् लोक बहादुर जस्ले ६ जनाको ज्या’न लिएका थिए (भिडियो सहित) – Khoj Dainik
September 11, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् लोक बहादुर जस्ले ६ जनाको ज्या’न लिएका थिए (भिडियो सहित)
गत चैत २६ गते आमा बितेपछि बुवा र भाई सहित तीन जनाको परिवारमा लोकबहादुर बस्दै आएका थिए । ह’ ‘त्या गरिएको तेजबहादुरको घरमा उनको आमा बे’हो’स भएपछि उपचारको क्रममा झापामा मृत्यू भएको थियो । उनको आमाको मृत्युको कारण पनि तेजबहादुर नै भएको लोकबहादुरले आरोप लगाउदै आएको छिमेकीहरुले बताउने गरेका छन् । ह’ ‘त्याको खबर छिमेकीलाई लोकबहादुरले नै दिएको थियो । झट्ट हेर्दा ‘सामान्य’ लाग्ने उनले कसरी यतिधेरै मानिसको ह’ ‘त्या गर्लान्? सुरूमा त प्रहरी नै अन्योलमा थियो।
प्रहरीले मृतक परिवारसँग कसैको केही ‘रि’सरा’ग’ थियो कि भनेर खोजी गर्‍यो, तर केही पनि फेला पार्न सकेन। जिल्ला नै ‘सि’ल’ गर्दा पनि शं’का’स्प’द मानिस भेटिएन। त्यसपछि प्रहरीले घटना भएको क्षेत्र वरिपरिलाई नै आधार बनाएर अनुसन्धान गर्न थालेको थियो। दुई परिवारको बिचमा पहिले आर्थिक लेनदेन समेत देखिएको छ। तर लोकबहादुरको परिवारले तेजबहादुरलाई उक्त रकम तिरिसकेको पाइएको छ।
प्रहरीले सबै अनुसन्धान सकेर आजै उनलाई सदरमुकाम खाँदबारी लैजाने तयारी गरेको छ। आइतबार सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट डीएसपी रुगम कुँवरको नेतृत्वमा प्रहरी पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लालध्वज सुवेदी, संघीय प्रहरी इकाइबाट एसपी भीम दाहाल र प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बिसी नेतृत्वको टोली पनि घटनास्थल पुगेको थियो। घटनाको ५ दिनपछि प्रहरीले ह’ ‘त्या अभियुक्त समातिएका हुन्।
गायिका काजल जोशी पुगिन कैलाली, बुवाको मुख अन्तिम पटक हेर्न (हाद्धिक श्रद्धान्जली बुवा) भिडियो हेर्नुस
बिहान उठ्ने बित्तिकै १०८ बत्तिलाई छोएर ॐ लेखि एक सेयर गर्नुहोस्, चिताएको काम पुरा हुनेछ !
दुनियाकै लामो कपाल भएको यस्ताे गाउँ, जहाँ महिलाहरुको कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् लाखौं पर्यटक (हेर्नुहाेस् भिडियाे)
ललितपुरको ड’रलाग्दो हल्लिने ठाउ,ज्यान जो’खिममा राखेर यस्तो सम्म​ गर्छन (हेर्नुस् भिडियो)